EU Vaccine Scandal ine vatatu vakundi vakuru: San Marino, Russia, uye Sputnik
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » EU Vaccine Scandal ine vatatu vakundi vakuru: San Marino, Russia, uye Sputnik
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • San Marino Kuputsa Nhau • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Republic yeSan Marino yakangoita mutambi wepasirese mune zvematongerwo enyika zveRussia, uye ndezvekudzivirira vagari venyika ino vachipesana nemitemo yeEU senyika isiri yeEU yakakomberedzwa neItari. nhengo yeEuropean Union.
Kunyangwe EU isingatenderi Sputnik Vaccine kubva kuRussia, iyo diki Republic yeSan Marino inogona kuburitsa Russian Sputnik jekiseni muEurope munguva pfupi.
Izvi zvinogona kugonesa San Marino kuuya kuzonunura mamwe maEuropean Nyika mukupa mushonga unodikanwa kwazvo weCOVID-19.
San Marino ine hukama hwakanaka neRussia Federation uye haina kutsigira zvirango zveEU.
Iyi nhau yebhomba yakaziviswa eTurboNews muhurukuro yakasarudzika naWTN Chairman uye eTurboNews Muparidzi Juergen Steinmetz, uye Mumiriri weSan Marino kuUAE, Hon. Mauro Maiani. Mr. Maiani vaive zvakare Musoro weDhipatimendi reInternational re Mutungamiri of ushanyi of San Marino uye inhengo yazvino ye World Tourism Network.
San Marino inyika yakavharirwa ine vagari ve33,986 uye yakomberedzwa zvizere neItari. Iyo Republic yeSan Marino ndeimwe yenyika dzekare republic. Iine hurongwa hwehurumende inopfuura mazana manomwe emakore, uye bumbiro rakanyorwa muna 1600.
"Hatisi nhengo yeEuropean Union", Mumiriri akatsanangura. "Tine chibvumirano chetsika neItari uye tinobvumidzwa kushandisa Euro semari yedu. "Isuwo tine hukama hwehukama neRussia Federation uye takagamuchira vanopfuura mazana matatu ezviuru zvevashanyi veRussia muna 300,000."
"San Marino haina kutsigira European Union Sanction kurwisa Russia."
Shamwari dzepedyo munzvimbo dzakakwirira, VaPutin vakasarudza kutengesa San Marino zvakakwana zveSputnik Vaccine, kuitira kuti San Marino ikozvino ive nyika yekutanga yakazara jekiseni muEurope.
San Marino yakamirira kuti Italy itore isati yadzokera kuRussia. Sekureva kwaVa Mai Maiani Italy yakanga yabvuma kutumira jekiseni rimwe chete pamishonga inosvika chiuru nemazana manomwe nemakumi mashanu yekudzivirira yakagamuchirwa kuSan Marino. Izvi ndezvehukama nehuwandu hwevaItaly uchienzaniswa neSan Marino.
Hapana kana mushonga mumwechete wakambosvika kubva kuItari, uye neyechina-yepamusoro nhamba yehutachiona pasi (zvichibva pahuwandu hwevanhu), San Marino aifanira kuita uye akafunga kuponesa vagari vayo.
"Ndakazvipira kuve chikamu chekutanga kudzidza uye ndakawana Sputnik Vaccine." Zvichakadaro, vagari vemuSan Marino vakatama kubva pachinzvimbo chakaipisisa pasi rese mujekiseni kuenda kune akanakisa.
Russia inogona kunge yakangoponesa hupenyu hwevakawanda muSan Marino. 4,586 COVID hutachiona kubva pavanhu 33,986 4 vakaisa nyika ino nhamba yechina pasi. San Marino ndiyo nyika yechitatu inouraya nekushandura kusvika ku2,501 kufa pamamirioni. Chete Gibraltar neCzech Republic vane mwero wakakwirira wekufa.
Sewaimbova Secretary-General weUNWTO, Dr. Taleb Rifai akaudza nhengo dzeWorld Tourism Network kakawanda ndeyekuti nyika dzese dziri dzoga.
Russia ikozvino iri kuona bhizinesi mukana wekutengesa iyo Sputnik muEurope, uye San Marino inogona kubvumirana. Parizvino Sputnik haina chero zvirimwa muWest Europe, saka ndeipi nzvimbo ingave iri nani, pane nyika yakazvimiririra isiri yeEU yakakomberedzwa neEuropean Union.
Gurukota rezvehutano reSan Marino uye Ministry yekune dzimwe nyika parizvino vari kukurukura chikumbiro chekuti Russia igadzire Sputnik chirimwa muRepublic yeSan Marino. Bulgaria, Hungary, pakati pedzimwe nyika vese vanga vatove vatengi uye vanogona kushora marongero eEU uye kutenga iyo Russian Sputnik Vaccine kana ikabudiswa muSan Marino.
Canada New Vaccine Zvinodiwa
Traffic-light system yakamisa zvikamu zviviri muzvitatu zveBrits kubva...
Vakasangana Netsaona Vanoda Kupera Kwesimba reBoeing Kuti...
BOEING 737 MAX kugadzirisa: Boeing inogadzira isina kuchengetedzeka ...
Ndege kubva Doha kuenda Almaty paQatar Airways izvozvi
Jackson Suber: Kuhwina Kunotyisa kuWhite Sands Bahamas NCAA...